IFM : Nampiaiky ny hakanton’ny mozikan-dry 3MA | NewsMada
IFM : Nampiaiky ny hakanton’ny mozikan-dry 3MA
Efa ela no niandrasana ny fahatongavan’ity tarika iray ity eto amintsika ary tanteraka tokoa izany. Nanolotra fampisehoana roa be izao izy telo mirahalahy, ny zoma sy asabotsy teo tetsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely. Tsy iza fa ny 3MA, ahitana an-dRajery, Ballaké Sissoko, avy any Mali, ary i Driss El Maloumi, Maraokanina, no tian-kambara eto.
Heverina fa hipetraka ho fahatsiarovana tsy hay fafana ireo seho nataon’ny tarika 3MA ireo. Tsy fahita, mirindra ary mambabo tanteraka, indrindra, ny mpankafy mozika ny kanto nentin’izy telo mirahalahy teny an-tsehatra. Sady mifameno no « mifamaly » ny feo atosaky ny zavamaneno lalaovin’izy ireo tsirairay avy.
Raha tsiahivina, samy mitendry zavamaneno misy tady (valiha, « kora » ary « oud ») Rajery, i Ballaké Sissoko ary i Driss El Maloumi. Zavamaneno mampiavaka ny firenena niavian’izy telo mirahalahy tsirairay avy ireo. Araka izany, nitondra famoronana vaovao ireto mpanakanto ireto, izay, raha tsiahivina, niorina tao amin’ity foibe ara-kolontsaina ity, sivy taona lasa izay.